Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Guam » Guam oo aan lahayn Dalxiisayaasha Kuuriya hadda waa taariikh
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Safarka • dhaqanka • Wararka Dowladda • Wararka Guam • News • Dalxiiska • Gaadiidka
Maanta, Guam wuxuu ku soo dhoweeyey booqdayaasha subaxnimadii hore ee duulimaadka Kuuriyada Koonfureed, isagoo calaamadeeyay socdaalkii dib loo bilaabay.
The Xafiiska booqdayaasha Guam (GVB) iyo AB Won Pat International Airport Authority (GIAA) ayaa soo dhoweeyay duulimaadkii ugu horreeyay ee dib uga bilowda Korean Air subaxnimadii hore.
Diyaaradda oo nooceedu ahaa B777-300 ayaa ka timid Incheon waxaana saarnaa 82 rakaab ah.
Kuuriyada Koonfureed ayaa mar kale billowday adeeg toddobaadle ah Guam tan iyo markii uu billowday masiibada COVID-19.
“Waan ku faraxsanahay inaan dib u soo dhaweyno Korean Air oo aan uga mahadcelinno ballanqaadkooda Guam mar kale. In kasta oo sannadkan iyo badhkii la soo dhaafay ay qof walba caqabad ku ahayd, haddana waa wax weyn in la arko iftiinka dhammaadka tunnel -ka oo sii dhalaalaya, ”ayuu yidhi Dr. Gerry Perez, Madaxweyne Ku -xigeenka GVB. "Waxaan rajeyneynaa inaan la shaqeyno in badan oo ka mid ah shirkadaha duulimaadyada iyo iskaashatada ganacsiga safarka si dib loogu xoojiyo warshadaha dalxiiska ee Guam."
T'way ayaa sidoo kale dib u bilowday adeeggii hawada ee caadiga ahaa 31 -kii Luulyo waxayna keentay 52 rakaab ah Guam. Jin Air ayaa sidoo kale kordhisay adeeggeeda hawada laba jeer asbuucii, kaas oo bilaaban doona maanta 2:42 pm Jin Air waa markab kaliya oo fadhigiisu yahay Kuuriya oo leh adeeg hawo oo joogto ah inta lagu jiro aafada oo dhan.
GVB wuxuu sii wadaa inuu sameeyo salaanta imaanshaha si loo soo dhaweeyo dhammaan duulimaadyada dib u bilaabanaya. Duulimaadyada la isku daray ayaa la filayaa inay Guam siiyaan qiyaastii 3,754 kursi ilaa dhammaadka Ogosto.
4 maalmood uun ka hor Tway wuxuu bilaabay adeegga u dhexeeya Kuuriya iyo Guam.